I-KDE, i-Gnome, i-Xfce, i-LXDE nombono wami ngabo. | Kusuka kuLinux
I-KDE, i-Gnome, i-Xfce, i-LXDE nombono wami ngabo.
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso, I-GNU / Linux, Okunye
Ama-desktops, njengokwabiwa, afeza inhloso yawo ngokuya ngezidingo zethu eziyisisekelo kanye nokusetshenziswa esikunikeza ikhompyutha, futhi okwamanje, ngicabanga ukuthi konke (Noma iningi) siyazi ukuthi ngamunye wabo anganikeza ini.
Ngizothatha ithuba. Mina, umsebenzisi ozame cishe wonke ama-desktops atholakala ku- I-GNU / Linux, Ngicabanga ukuthi kukhona okuyisi-4 okuyinhloko noma okubaluleke kakhulu njengamanje, futhi ngizochaza ngayinye yazo ngale ndlela:
1 I-KDE: Ideskithophu ephelele kakhulu futhi ekhiqiza kakhulu ye-GNU / Linux.
2 IGnome: Inkosi engenasihlalo sobukhosi.
3 I-Xfce: Enye indlela eya kwi-Gnome 2
4 I-LXDE: Encane kakhulu, esheshayo kepha enamandla amakhulu ekilasini
I-KDE: Ideskithophu ephelele kakhulu futhi ekhiqiza kakhulu ye-GNU / Linux.
Kusukela lapho iphuzu lokuthi "okungcono kakhulu" kuncike ekunambithekeni nasezidingo zalowo nalowo muntu, akuyona imfihlo kunoma ngubani ukuthi ngezikhathi zayo ezinhle nezimbi, KDE ibilokhu iphethe indawo enhle phakathi kwabasebenzisi be I-GNU / Linux.
Ngokuhamba kwe- I-KDE 4 izinto zaba zimbi, nangokunyamalala okuseduze kwe- I-KDE 3.5, Mina, njengabaningi, ngagijimela ngakuye I-Gnome. Futhi ngiyavuma ukuthi njalo ngangizizwa ngingenalutho oluthile.
Yini eyenza KDE okuphelele ngakho kudlula okungabonakala ngeso lenyama. Isibonelo, into ebengihlala ngiyigxeka inani lezinketho eliqukethe, ideskithophu nezinhlelo zayo zokusebenza. Kepha ungangilaleli, lokhu akukubi neze ngoba kungelinye lamaphuzu asekela ideski laseJalimane.
Inkinga mhlawumbe ukuthi kwabanye, zonke lezi zinketho azikho endaweni efanele futhi lokhu kubangela abasebenzisi abaningi ukuthi bazizwe bekhungathekile ngamathuba amaningi, engiwaphindayo, kuphela aletha izinzuzo.
Nge-KDE unomuzwa wokuthi uhlelo lokusebenza ngalunye lunakho okudingayo nokuncane kakhulu. KDE ithuthuke kakhulu maqondana nokusebenza nokusebenza kahle, futhi ngaphandle kokushiya izikimu esizijwayele, ikwazile ukwethula izindlela ezintsha zokusebenzisa ideskithophu. Isibonelo salokhu I-Plasma futhi i Imisebenzi, amathuluzi angasetshenziswa kahle kakhulu njengoba kungenzeka, nokuthi abaningi bethu abakaqondi.
KDE ideski elenzelwe bonke labo basebenzisi abazimisele ukufaka engcupheni ukusetshenziswa okuncane, kepha bona abazothola inzuzo yokuzuzisa kakhulu futhi basebenze kahle emsebenzini wabo wosuku nosuku nekhompyutha. Kimi, i-Desktop Environment idlula ngaphezu kokuba nephaneli (noma amabili), imenyu, ithreyi yohlelo ... njll. Imvelo yeDeskithophu ingamathuluzi nezinhlelo ezisivumela ukuthi sisebenze ngokunethezeka ngamafayela namafolda ethu, nakulokhu KDE kuthatha izintende.
Yini esiyisebenzisa kakhulu lapho sisebenza nekhompyutha? Ngicabanga ukuthi abafundi abangama-98% bale bhulogi bazovuma nami ukuthi yiMphathi Wefayela neFolda. KDE Iqukethe lolu hlelo lokusebenza olungadingi isethulo nokuthi yiziphi izimfanelo nezinketho ezikhona: I-Dolphin. Uma ungakwazi ukukhiqiza nge I-Dolphin, lapho-ke ngeke kube nomunye Umphathi Wefayela neFolda, olula kanjalo.
I-Dolphin Inikeza ngamathebhu, amapaneli angeziwe, i-terminal edidiyelwe, injini yokusesha, isihlungi sosesho, nezinye izinzuzo ezikwenza ukwazi ukulawula ngokuphelele amadokhumenti akho, amafayela noma amafolda.
Kodwa KDE iya phambili. KDE isinikeza ukuhlanganiswa okuphelele nokuphelele phakathi kwengxenye ngayinye yezinto zayo. Noma ngingazisebenzisi ikakhulukazi, inhlanganisela Akonadi / Nepomuk / Virtuoso bakunikeza amandla angenakuqhathaniswa uma usetshenziswe kahle. Uma udinga ukwenza okuthile, akuvamile ukuthi ungakutholi KDE uhlelo lokusebenza olufanele.
Ukuncoma kwami: KDE Kungenxa yalabo basebenzisi abafuna ukuba nakho konke okusondele, basebenze kahle, bakhiqize futhi bonge isikhathi esiningi ngangokunokwenzeka. Indawo ekahle yabasebenzisi abaphatha inani elikhulu lolwazi, onjiniyela, abaklami noma abafuna nje ukuba nenketho yakho konke, futhi balungiselele ideskithophu yabo ngendlela elula kakhulu.
IGnome: Inkosi engenasihlalo sobukhosi.
I-Gnome ngokungangabazeki bekuyisikhathi eside inkosi yezindawo zedeskithophu ngokombono wami. Ngokuhamba kwe- KDE4, ukuphakama kwe- Ubuntu, kanye nokulula okuhlale kuyiveza, kancane kancane kwaba yintandokazi yabasebenzisi abaningi emhlabeni jikelele ngokukhululwa kwe I-Gnome2, lapho konke kwakulula, futhi ukufinyelela kuzinhlelo zokusebenza kanye nezinketho zeDeskithophu kufinyelelwe ngokuchofoza okumbalwa.
I-Gnome2 Kuyimvelo yeDeskithophu lapho bekungenziwa khona okuningi futhi okungenziwa kangcono ngakho. Kodwa-ke, onjiniyela bephrojekthi bangena ku- I-Gnome3, Imvelo yeDeskithophu enezincwadi ezithuthukisiwe, kepha ezimele ushintsho olungazelelwe (okukhulu kakhulu kunalokho okubangelwe yi- KDE4) yabasebenzisi be I-Gnome2, oshiye ekuhlakazweni efuna ezinye izindlela ezinjenge Xfce, I-LXDE noma ungumnikazi KDE.
Angeke ukusho lokho I-Gnome neyakhe shell kube isicelo esibi kude naso. I-Gnome3 Isenamandla amakhulu futhi inamathuluzi amahle kakhulu, ngisho nabasebenzisi abaningi banethezekile ngezindaba, kepha ifilosofi yomsebenzi ebonakalise leli deski ishintshe kakhulu futhi ukubukeka kwayo, ngiyakholelwa, akugxile kumsebenzisi ojwayelekile wokugcina.
Noma ngabe iyini inhloso yabathuthukisi bayo, sibonile kule bhulogi izinguquko ebezenzeka kule desktop, okuthi ngokombono wami, aziphumeleli nakancane. I-Gnome izama ukungena emakethe engenawo umhlaba, nalapho kukhona ezinye izindlela ezisezingeni eliphakeme. Ikusasa le I-Gnome ngaphakathi I-GnomeOS, iphrojekthi engingalokothi ngiphawule ngayo, ngoba kuncane kakhulu okwaziwayo ngayo.
Kepha akuyona yonke into embi, njengoba bengisho, I-Gnome Inezinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu, ezilula ngokwedlulele ukumisa, kokunye ishoda ngezinketho ngokuqhathaniswa nalezo enazo KDE, kepha inamandla futhi iyasebenza.
I-Gnome futhi isebenza njengesisekelo sokunye AmaShells kuthakazelisa kakhulu njengoba zinjalo Unity y I-Cinnamon. Umphathi Wakho Wefayela neFolda (INautilus), yize ingenazo zonke izimfanelo ze- I-DolphinIphinde ikhiqize futhi ilula kakhulu uma iqhathaniswa neyaphambilini eshiwo. Kuthuthukiswa ku IGtk, Inamaphakeji amaningi futhi avela eceleni, kodwa ngeshwa iSilo besilahlekelwa ukuthandwa.
Ukuncoma kwami: I-Gnome Kungenxa yalabo basebenzisi abakhangwa yizinselelo ezintsha nezindawo zokuxhumana ezintsha ezibhekiswe ikakhulukazi kubuchwepheshe bokuthinta, abangenandaba nokusebenzisa ikhibhodi nokuchitha izinsiza ezincane. Kuhle uma usebenzisa amanye amagobolondo afana I-Cinnamon o Unity.
I-Xfce: Enye indlela eya kwi-Gnome 2
Xfce ufikile ukuzovala isikhala esivuleke kwabaningi I-Gnome2. Ideskithophu esivele ineminyaka embalwa ubudala futhi ebilokhu iguquka kancane kancane, ukukhula kwayo okuhamba kancane kungenxa yabahleli abambalwa enabo. Okuthile cishe kuyindida uma sikubheka lokho Xfce kuye kwaduma eminyakeni yamuva.
Xfce bekulokhu I-Gnome ngokusebenza okuncane. Ukubukeka ngokufanayo kuyafana futhi kuyahlangabezana nezidingo zokuba lula, kusheshe, kube lula ukusetha futhi kube okwenziwe kwaba ngokwakho, kuhle ngokwedlulele. Kepha njengoba yonke into ibingenakulunga, iswele izinto eziningi, izinhlelo zayo zokusebenza zilula ngokwedlulele futhi ayinayo amathuluzi amahle okuphatha uhlelo.
Vele, ukwakhiwa phezu IGtk, ungazisebenzisa ngokuphelele izinhlelo zokusebenza ze I-Gnome, kodwa okungenani ngingathanda ukuthi ibe namathuluzi ayo amaningi.
Elinye lamaphuzu abuthakathaka we Xfce imenenja yakho yefayela neFolda: IThunar. Ngaphansi kwezaba zokuthi kuzolahleka ukukhanya, onjiniyela banqena ukufaka amathebhu noma amaphaneli angeziwe, ngakho-ke ukusebenza nalolu hlelo kunciphisa ukukhiqiza okuningi.
Konke okunye, konke kulula kakhulu futhi kungalungiswa Xfce ngokuphelele (noma ingxenye enkulu) kusuka esikhungweni sakho sokulungiselela. I-Version 4.10 ingeze ukuthuthuka okuningi kubasebenzisi futhi kungathakazelisa ukubona ikusasa lale ndawo yedeskithophu manje Debian ikwamukele njengedeskithophu ezenzakalelayo.
Ukuncoma kwami: Xfce Kungenxa yalabo basebenzisi abangadingi ukwenza imisebenzi ethuthukile ngohlelo, abathanda iDeskithophu elula, futhi abafuna ukufinyelela kuzo zonke izinhlelo zabo ngokuchofoza okumbalwa. Kungaba kuhle kubalobi, Izintatheli nabantu abasebenzisa ikhompyutha ukwenza izinto eziyisisekelo, kunikeze ibhalansi phakathi kwamandla nejubane.
I-LXDE: Encane kakhulu, esheshayo kepha enamandla amakhulu ekilasini
I-LXDE incane kunazo zonke Izindawo zeDeskithophu ezithuthukisiwe IGtk, iyashesha kakhulu futhi ngenxa yalokho, lena entula kakhulu izinhlelo zayo zokusebenza, ngakho-ke Xfce, kufanele usebenzise amathuluzi amaningi kusuka ku- I-Gnome ukuqedela ububanzi bayo bamathuba.
Ukubonakala kwayo ngokuzenzakalela kusikhumbuza ngeWindows XP futhi ngomsebenzi omncane ungathola ukwenziwa okuhle okuhle, kepha, iphuzu esivuna le Desktop Imvelo yiFayela neFolda Manager yayo: I-PCManFM.
I-PCManFM Inezimfanelo ezithile zabafowabo abadala njengama-eyelashes, ahlanganiswe nejubane layo nobuhle bayo, ayenze enye indlela engcono kakhulu IThunar, edlula kude ngokwendlela yokukhiqiza, ukwenza ngokwezifiso nokulungiselela.
Ukuncoma kwami: I-LXDE Ilungele amaqembu anezinga eliphansi ngenxa yebhalansi elisinikeza yona phakathi kwejubane nokulula. Kunconyelwe abasebenzisi abanolwazi oluncane, ngoba konke akusondele kangako.
Ngikusho ekuqaleni ngiyaphinda ngiyaphinda: Ideski ngalinye liqediwe noma cha ngokuya ngezidingo zalowo nalowo. Noma yikuphi kwalokhu okuhlukile okungu-3 (ukuphuma Igobolondo le-Gnome)Ukulungele futhi ukulungele ukuyisebenzisa, kungaba lula ukuyisebenzisa kubasebenzisi abasha.
Lokhu okuthunyelwe akulutho ngaphandle kokubuyekezwa okukha phezulu nokungachemi ngakunye kwalezi Zindawo zeDeskithophu. Umsebenzisi ngamunye uyazi ukuthi bangawenza ngezifiso kangakanani, amise futhi basebenzise izinketho zomunye nomunye wabo, okuyinto, engingakwazi ukuyisho lapha.
Zonke zikulungele ezikwenzayo, futhi ngayinye iphendula izidingo zezinhlobo ezahlukene zabasebenzisi. Uma ungibuza, ngizohlala ne KDE y Xfce, kuya ngokuthi yini okudingeka uyenze. Ukhetha muphi?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » I-KDE, i-Gnome, i-Xfce, i-LXDE nombono wami ngabo.
Amazwana ayi-148, shiya okwakho
Adoniz (@ NinjaUrbano1) kusho
Iqiniso ukuthi ngithanda i-Xfce, i-LXDE ne-KDE, zinhle uma enye noma enye incike kwi-Hardware ngoba kubo bonke 3 ngingenza izinto ezifanayo kodwa hhayi ngendlela efanayo. Xp
Phendula u-Adoniz (@ NinjaUrbano1)
I-Makubex Uchiha (azavenom) kusho
lolo lwazi oluhle bangani xD kimi ngiyayithanda i-kde yize yona ngokwayo inzima kepha anginendaba nayo: 3 kuyinto enhle uma ukwazi ukuyenza ngokwezifiso njengoba ufuna i-xD lapha ngikushiya njengoba ngishiye i-kde yami eyigugu:
futhi yapa 😛 ngishiya lesi sifundo engisenze kubhulogi yami ukuyishuna ngiyishiye ishumi 😛
Phendula uMakubex Uchiha (azavenom)
Kunginikeza leli phutha:
Bengivele ngiyazi izolo ngokungafanele umphathi ubemise ibhulogi yami ngeqiniso elilula lokuthi ngifinyelele cishe ku-3000 ukuvakashelwa cishe ezinyangeni ze-4 ebenginakho, futhi ngithi cishe 3000 ngoba bengisala kancane ukufika lapho futhi lokho kwenzeka kimi kanjalo akukho lutho ngaphandle kokungixwayisa ngaphambili futhi yingakho ngilahlekelwe yikho konke okungibize ukukwenza 🙁
Ngangazi ukuthi ngokushesha nje lapho u- @elav ezama i-KDE ukuthi azohlala ne-hahaha. I-KDE ithuthuke kakhulu kulezi zinguqulo zokugcina futhi kule nguqulo bazogxila ekulungiseni izimbungulu nokubuyela emuva, isinqumo esihle kakhulu sonjiniyela sokuthi "balande ushintsho"
I-GNOME2 ibe kimi ideskithophu enethezekile kakhulu, enziwa ngezifiso, eshesha kunazo zonke. Kuyadabukisa ukuthi ifilosofi yakhe isishintshile. Kungakho ngincamathela kuDebian Squeeze kuze kuphele ukuxhaswa kwayo, lapho-ke ngiyocabanga ngokuthuthela ku-openbox, owazi i-xfce.
Njengamanje ngine-KDE neXfce ku-netbook of work. Kumele ngivume ukuthi muva nje ngisebenzise i-KDE eningi…
I-KDE ingenye into. Ngisebenzisa futhi i-KDE neXfce kepha kufanele ngivume ukuthi nge-KDE ukufika nokusebenzisa, konke sekumi ngomumo ukuze umsebenzisi angadingi ukwenza noma ukwazi noma yini, efanelekile ekusebenzeni nasekuchitheni isikhathi ukulungisa izinto.
Okwamanje ngikubhalela ngivela kuXfce futhi iqiniso ukuthi kufanele ubeke isikhathi esihle ukuze ulungele "ngoba ngokuzenzakalela kuyesabeka, empeleni ngichitha isikhathi esiningi ukulungisa nokulungisa kune-xDD yokusebenza
Yebo kunjalo, kepha ukuze ubone, iTuning Xfce kimi ilula kakhulu kune-KDE. Ngaphezu kwalokho, i-Gtk inezindikimba eziningi nezinketho eziningi, kufanele uqhathanise ukubukeka kwe-gnome ne-kde-look ..
> ezinye izihloko eziningi
Ingabe leyo ingqikithi eza ne-KDE (ne-Obsidian) yinhle kakhulu
Sawubona umbuzo owodwa. Masikhohlwe ngokushuna, singesabi lutho, imibala, imihlobiso, njll. Sizogxila ohlelweni kuphela nasezinhlelweni zokusebenza ezizokwenzeka, ngaphandle kwe- "pops" ngoba isibonelo, umbala noma umphumela wewindi ngeke wenze uhlelo engiludalayo noma okuthile engikuphenyayo ngobungako imisebe emkhathini iyazixazululela yona (yingakho ngithi "pijadas" ezingabalulekile). Usebenzise i-linux iminyaka embalwa (Ubuntu, Opensuse, Fedora, Scientific Linux ku-Gnome, KDE neXfce) futhi ushintsha ukusatshalaliswa kwezinto zehadiwe futhi muva nje ngoba angikwazi ukufaka njalo ezinyangeni ezimbalwa, ngidinga iminyaka ngoba izivivinyo yilokho okungigcinayo , futhi kungumsebenzi, ucwaningo. Ayikho imidlalo ye-marcinanito, azikho izinto ezingajwayelekile, mhlawumbe ividiyo nomculo othile we-mp3 futhi kukhompyutha yami kuphela. Kepha-ke, angithandi ukuba nokwabiwa okungafani nezindawo kwikhompyutha ngayinye, uma kukhona amakhompyutha ayi-5 afakiwe ngokufanayo ezintweni zami zangasese. Isikhathi sibaluleke kakhulu futhi angikwazi ukuba namasiko noma imikhuba ehlukile kusuka kwikhompyutha eyodwa kuya kwenye, ngokusebenzisa uhlelo endaweni eyodwa bese kuba kwenye indawo enezinketho ezahlukene, amathebhu, njll. Uyakuqonda engikushoyo, noma ngabe omunye umuntu uzothi lezo zinhlelo zokusebenza zingasetshenziswa kuma-desktops ahlukene. Kepha akunjalo.
Ngakho-ke ngikhethe iScientific kepha i-KDE eyithwele mdala kakhulu, noma ngabe incane, iyasebenza futhi iyinto engiyikhathalelayo, kepha le ndawo ingeyesibili futhi ayikuniki ukubaluleka okudingekayo ukuze ifakwe kahle futhi iphelele. Okungenani angikaze ngibe nakho njengakwiFedora KDE kusukela ku-Spin yayo. KuScientific, njengakwiCentos ngicabanga ukuthi, kuzodingeka ukuthi usebenze ngesandla izinhlelo eziningi ze-gnome, uma ubazi ukuze bazikhombe kungenye, ukushiya i-KDE emsulwa. Kepha engikushoyo, angikufezi futhi angazi noma ngabe yiphutha lami noma ukuthi ukwabiwa akuniki okuningi.
Ngakho-ke namuhla iSlackware eneKde neXfce isemqondweni wami. Ungakhetha yiphi? Ngicabanga ukuthi nginomshini omdala ozokwenza i-Kde enhle, yize nge-SL ihambe kahle futhi neXubuntu yakamuva ibe ngcono. UXubuntu akayi kimi, lutho Ubuntu, yingakho angiqambi amanga. Ngakho-ke inketho eyodwa kungaba i-Kde kukho konke ngaphandle kwale endala ene-XFCE, kepha… .Mayelana nentambo yesincomo sakho se-KDE yezindawo ezikhiqizayo, ungasikisela nami ngoba ngizinikele ekucwaningeni eyunivesithi kuphela?
Kumele ngithi i-SL ene-Gnome iyona ehamba phambili, ngifisa ukuthi isebenze kahle ne-KDE, kepha sengivele ngathi angiphumelelanga. Uma noma ngubani enesincomo sokufaka i-KDE ku-SL noma kumaCentos ngenhlanzeko efanayo ne-Fedora KDE spin ngingakuthokozela. Isihloko sama-multimedia codec nezinto ku-SL KDE kuyabulala kancane.
Enye into nge-KDE nesincomo sakho. Ngisebenzisa ama-USB drive kakhulu futhi kubalulekile. Futhi eGnome zikhishwe ngokuhlanzekile, kepha hhayi ku-KDE ngehlengethwa, ungaziqaqa, yebo, kepha zihlala zondliwa futhi ekugcineni kufanele uzidonse ngokugedla amazinyo ... ngolunye usuku idiski izophuka, impela! Ingabe unaso isixazululo ku-KDE? Lokhu kubalulekile ngoba bengisebenzisa i-SL Gnome kulokhu.
Ngiyabona ukuthi ekugcineni bekungewona umbuzo. Ekugcineni, ucabangela umsebenzi wami, ingabe uyayincoma i-SL noma i-Slackware?
Sanibonani, futhi niyazi ukuthi ngenxa yabantu abanjengawe, iningi lethu lishiye iWindows.
Ngokusobala bekuwubuchwepheshe obukhulu futhi kukhona onjiniyela abambalwa noma ososayensi lapha. Ngiyabonga noma kunjalo ngoba ezinye izinto ozibhalayo ziyasiza kakhulu. Ngangiyifunda cishe nsuku zonke.
Yup, sengiqala ukukholelwa ukuthi yebo hahaha
Yebo !!! \_ (ツ) / kepha wonke umuntu ndawonye wenza kahle kakhulu.
Ngincamela i-LXDE nokuthi leyo "engenamandla amancane" ngandlela-thile inokhahlo emvelweni onombono wami onesizotha ongomunye wabaphathi befayela abalula kunabo bonke engake ngababona, njenge-PCManFM, kodwa hheyi. Ekuqaleni ngangisebenzisa i-Gnome futhi ngangiyisebenzisa lapho ikhuphukela eGnome 2 kepha ngangingomunye wabokuqala ukushayisana neGnome 3 futhi empeleni uShell wabo noma yini iGnome 3 engitshele ukuthi sekuyisikhathi sokucinga ama-horizons amasha ngize ngifike ku-LXde futhi Ngiyajabula ukubona ukuthi kwezinye izinto kwakushesha kakhulu kune-XFCE kepha ngiyabona ukuthi iXFCE iyishaya kuRobustness ngoba yize kunabathuthukisi abambalwa (ngiyaqiniseka ukuthi umphakathi weXFCE mkhulu kuneLXDE) kepha sawubona… uhlanya ngengqikimba yakhe.
Kubukeka kunganamandla kangako kimi, ngoba ngayo ungenza izinto ezifanayo nakwezinye izindawo, nangokusetshenziswa okuncane, ngokwesibonelo yingakho ngithanda uLubuntu, inesihloko esihle kakhulu esibukwayo futhi sisebenzisa okuncane kakhulu.
Kunoma ikuphi, ngingasho ukuthi inembile kakhulu kubasebenzisi besikhathi sokuqala kunezinye izindawo, ikakhulukazi kwisici sokumisa i-LXDE, okuyilapho ixhuma khona kancane ...
Yebo, impela ungenza izinto ezijwayelekile ngezinye izindawo, kepha ziyimisebenzi elula futhi eyisisekelo.
Ake sibone, ngizokwenza kube lula kuwe. Uma ngibhekisa kwabanamandla, ngikwenza ngokususelwa kuzindawo zokukhiqiza ezinikezwa yithuluzi. Isibonelo, phendula le mibuzo elula:
- Ngabe iPCManFM inebha yokuhlunga okuqukethwe?
- Ngabe iPCManFM inenjini yokusesha eyakhelwe ngaphakathi?
- Ngabe iPCManFM inesiginali esakhelwe ngaphakathi?
- Ngabe iPCManFM inawo amaphaneli?
- Ngabe iPCManFM inayo inketho yokukhombisa amaqembu amafolda?
- Ngabe iPCManFM inenketho yokuqhathanisa amafayela?
Awudingi ukungiphendula ngoba ngiyayazi impendulo. Mina ngokwami ​​kufanele ngivume ukuthi noma ngabe ngiyithanda kangakanani iXfce, ayisoze yaba nengxenye yezinketho i-KDE enazo, okuthi ngamathuluzi ayo ziyenze ibe yiDeskithophu ekhiqiza kakhulu nenamandla kakhulu ekhona.
Nge-savvy, vele uqhathanise i-krunner ne- "run" yeGnome. 😀
Kepha ukuthi umkhiqizo uhambisana nomqondo wakho wokukhiqiza, okungasho ukuthi uyiphutha, kepha kimi okuthile okukhiqizayo uhlelo olungivumela ukuthi ngenze isenzo esithile ngokushesha futhi kalula, ngawe ukuthi iPCManFM inebha yokuhlunga okuqukethwe noma ukusesha noma ukuphela kuyimisebenzi, kimi kungokwengeziwe, kusebenza lokho noma ezinye izinhlelo ezenzelwe bona ngokukhethekile, njenge-terminal, noma ibhokisi lokusesha (okuyiqiniso ukuthi kuyinto i-LXDE ngokuzenzakalela ayinayo isikhashana) noma ukuhlunga, ngaphandle, yizinto ongangeza ngokuchofoza kabili, noma lokho njengoba ngishilo, ezinye izinhlelo ezenzelwe yona zingakwenza.
Isibonelo, kungani uzohlela isithombe kusuka ku-Word, ukwazi ukusihlela kusuka ku-Photoshop, esidalelwe sona?
Ngaphandle kwalokho, i-LXDE yadalwa ifuna ideskithophu elula futhi elula, elingana nemisebenzi embalwa noma imisebenzi engaphelele noma emfushane, ngakho-ke uma umuntu efuna ukukhiqiza, abakhethi i-LXDE ngoba ayidalelwanga lokho.
Ngaphandle kwalokho, uma ufuna ukukhiqiza emsebenzini enkampanini, kuzofanele usebenzise iWindows ngezinhlelo zayo zamahhovisi nama-suites, kanye nezinye izinhlelo ezenzelwe lokhu noma lowo msebenzi noma umsebenzi, ngaphandle kokuthi kufanele usebenzise iWindows emsebenzini. I-GNU / Linux.
I-LXDE ayinamandla amancane, kungcono, ingakhiqizi kakhulu kunezinye izindawo zedeskithophu, kepha ngicabanga ukuthi amandla awahlotshaniswa kuphela nezinga lokukhiqiza, kepha futhi nezinto eziningi, njengokusebenziseka, ukufinyeleleka, isici esibonakalayo ...
Kepha ukuthi ukukhiqiza kuhambisana nomqondo wakho wokukhiqiza, okungasho ukuthi uyiphutha, kepha kimi okuthile okukhiqizayo uhlelo olungivumela ukuthi ngenze isenzo esithile ngokushesha futhi kalula, ngawe ukuthi iPCManFM inebha yokuhlunga okuqukethwe noma ukusesha noma ukuphela kuyimisebenzi
Ngokuqondile, imisebenzi eyenza ukusebenza ngamafayela, izingobo zomlando, amafolda kube lula kakhulu. Ake sithi uvula i-PCManFM, uya kufolda enezincwadi eziyinkulungwane ze-PDF, uqala ukuthayipha igama layo nokuthi okuthayiphayo kufanele kufane negama langempela. Ngesihlungi seDolphin, njengoba ubhala, eminye imibhalo iyanyamalala, kusale kuphela ukuqondana kwezinto ... Ucabanga ukuthi iyashesha futhi ikhiqize kakhudlwana?
Angivumelani nawe nhlobo mayelana neWindows = Productivity .. Okokuqala, iWindows Explorer iyanengeka, iyimbudumbudu, zonke izinto zikhonjiswa ngendlela edidayo, ayinembile, ayinayo amathebhu noma amapaneli athe xaxa. Kulula kakhulu ukusebenzisa i-PCManFM noma iThunar kuneWindows Explorer, ukukunikeza isibonelo.
Ake sibheke, uma uthatha leyo ngxenye yesigaba kuphela, kungenzeka ukuthi ayinangqondo, noma iqondana nalokho okucabangayo, kepha enye ingxenye iyinsika yengxabano yami, iyimisebenzi, yebo, kepha imisebenzi eyengeziwe, akuyona into okufanele ngiyenze Ukuba ne-PCManFM kufanele ibe no-yebo noma yebo, uma leyo misebenzi oyisho ikusiza ukuthi ukhiqize ngokwengeziwe, kuhle kakhulu, kepha uma kwaziwa ukuthi kuthinta ukusebenza, futhi i-LXDE kufanele ikhanye futhi ilula, ingakhiqizi, noma cha Kanye nezinye izindawo, izikhathi eziningi kunezinhlelo ezilula, ezikhanyayo nezikhiqizayo nezinye izikhathi ezingekho, ngoba kunzima ukuthola ibhalansi ephelele phakathi kokukhanya okuthile (okuvame ukuba nemisebenzi embalwa, izinketho noma izici) nokuthile okukhiqizayo.
Futhi angishongo ukuthi iWindows iyafana noma ihamba phambili ekukhiqizeni, kepha ukuthi imvamisa iyona esetshenziswa kakhulu ezinkampanini ukusebenza, okungasho ukuthi ukusetshenziswa kakhulu, ikhiqiza kakhulu.Uma uqinisile, iWindows Explorer Iyamunca, kepha iyona esetshenziswe kakhulu, okungasho ukuthi ikhiqiza kakhulu.
Ngisebenzisa i-LXDE futhi njengomphathi wefayela ngisebenzisa i-Nautilus ngakho-ke into ye-PCmanFm isiphelile, futhi ngokwami ​​ngikhetha i-GNOME, nokuthi akuyona eyomsebenzisi wokugcina, kungamanga alabo, yindawo yalowo msebenzisi awufuni ukuya pimp konke okunye, ilungele ukufika okusha kweLinux
Ngisithande kakhulu lesi sihloko, futhi uma ngibheka iwebhusayithi yakho uma ngibona isinambuzane, ubona okuncane kakhulu ukuthi umbhali ungubani, okungukuthi, lelo bhokisi elincanyana ekugcineni kufanele uligcine, kepha ubeke kwenye indawo olibhalile, Mina ngokwesibonelo ngizokubeka futhi eduze kwekhawunta yokufunda.
Mayelana nendatshana uqobo lwayo, i-KDE manje iyindlela engcono kakhulu futhi ephelele, yize ngingathanda ukuthi ithuthukise ezinye zezicelo ze-KDE, angithandi lutho, ngokwesibonelo, i-Dragon Player, noma i-VLC, futhi iqiniso ngukuthi, ngithola ezinye izindlela ezimbalwa okuhle njengabadlali bevidiyo eQt, iBangarang ayidonseli amehlo kimi .. uma wazi abanye, ngingakuthokozela.
Siyabonga ngokusikisela. Empeleni, besivele sicabange ngokubeka umbhali phezulu .. 😀
Mayelana ne-KDE, ngiyayithanda i-VLC yami njengoba injalo, futhi ngisanda kuthola iBangarang futhi ngiyayithanda 😀
Ake sibone, akukhona ukuthi angibathandi, yingoba ababona abadlali bevidiyo be-GNU / Linux engibathanda kakhulu, ngicabanga ukuthi ngikutshele, eGnome, ngiyayithanda iTotem, yilokho umdlali okufanele abe yikho kimi , izinketho ezilungile nezidingekayo, isikhombimsebenzisi esibonakalayo esilula ... Ngifuna into efanayo ku-KDE, yomibili ilayishwe kakhulu, futhi angiyithandi i-Dragon Player.
IBangarang ayisona isidlali sevidiyo esibi, kepha iyisidlali esibi nomhleli wemitapo yolwazi yomculo, yingakho ngingayifuni, ngiphasa izinhlelo eziphindiwe, uma i-Amarok isivele iwenza kahle umsebenzi wokudlala umculo, kungani kufanele ngibe nomunye umdlali lokho kungikhiqizela mina, kepha ukuthi ngikuhlele kahle?
I-Amarok noma i-Clementine yomculo, ngenkathi i-VLC yevidiyo, njengoba ngiqhubeka nokusesha kwami ​​izidlali zevidiyo ezihloniphekile nezilula ze-KDE.
Thobile (@ thembekamthethwa22) kusho
Zama i-SMPlayer ngiyithande kakhulu futhi ngisebenzise i-VLC impilo yami yonke.
Phendula ku-truko22 (@ truko222)
Ngiyabonga nakulabo obafakile, yize i-smplayer yami ingasithandi isikhombimsebenzisi, ifana ne-VLC, imbi futhi ilayishwe ngokweqile ngezinketho.
Zama i-SMPlayer 😉
Kulungile, kulungile nami ngiyazama 🙂
Ungazama i-kaffeine, i-umplayer, i-kmplayer, i-playbak, i-bakaar, i-loopy, bonke bangabadlali bevidiyo be-kde abahle kakhulu.
Ngiyabonga ngohlu, ngiyathembisa ukubabheka 🙂
UMiguel Angel Martinez kusho
Yebo, iqiniso ukuthi selokhu ngathola iSMPlayer angifuni ukubuyela kuVLC.
Ngingaqhakambisa ukuhlanganiswa kwayo konke ne-KDE, umphathi wayo wemibhalo engezansi (Iyazilanda ngisho) nokuthi ukukhiqizwa kabusha kwevidiyo kuyaqhubeka lapho ngiyeke khona (Akukho kuVLC)
Phendula uMiguel Ángel Martínez
Ngithanda cishe wonke umuntu ngaphandle kwe-lxde.
Ngizamile isinamoni, ngisebenzisa ubumbano, ngisebenzisa igobolondo le-gnome, ngiyalithanda kepha angazi ukuthi ngililungiselela kanjani ukuze lihle kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi, i-KDE ingenye yalezo engizibonayo futhi ngiyazikhumbula amawindi futhi lokho kunginika ukwenqatshwa, kepha angiphiki ukuthi ama-desktops amaningi e-kde engiwabonile mahle, kepha angazi ukuthi bakutholile kanjani, kepha inkinga ukuthi ifika kanjani ngokuzenzakalela (chakra, namanye ama-livecd distros ane-kde) angizange ngikuthande nakancane 🙁
Iqiniso. Lokhu ukutshelwa ngumuntu ongakuthandi ukubukeka nokuzizwa kwe-KDE ngokuzenzakalela, kepha njengeXfce, i-KDE ingenziwa ngezifiso ngokuthanda kwakho futhi ikwenze ibukeke njenganoma iyiphi enye imvelo yedeskithophu.
I-KDE neXfce yizona ezenziwa ngezifiso kakhulu ..
Ne-LXDE nayo. Ayinawo amathuluzi wokuqhafaza amaningi ukukwenza, kepha ingenziwa ngezifiso, ingakwazi, nokuningi.
Kepha usebenzisa imali ethe xaxa, ngicabanga ukuthi .. Kunezinto okufanele uzifake ngesandla kufayela le-.gtkrc-2.0 noma i-gtkrc.mine, ngokwesibonelo.
Yebo, kuyiqiniso ukuthi ukumisa amafayela wombhalo kuthatha isikhathi esithe xaxa kunokwenziwa ngamathuluzi wokuqhafaza. Manje, njengoba ngingeyena walabo abathanda ukuba nedeskithophu ehlukile masonto onke, ngenza inqubo yokumisa cishe kube kanye, ngesikhathi sokufaka. Ngemuva kwalokho, uma kungukuthanda kwami, ngikhohlwa ukwenza kube ngokwakho ideskithophu (ikakhulukazi ushintsho lodonga).
Ngaphezu kwalokho, lapho ngibona ukuthi i-LXDE isebenza ngokushesha okunjani uma iqhathaniswa nezinye izindawo, angizisoli ngokudlula ekucushweni okuyinkimbinkimbi ngokwengeziwe, ngoba ubungqabavu bemvelo bukhokhela noma yiziphi ezinye izithiyo okungenzeka ukuthi zikhona ... kimi, kunjalo.
kutaringa kukhona okuthunyelwe kune kde okuhle kakhulu.
Futhi isixhumanisi sithi? Ngiyabonga 😀
Kuliqiniso ukuthi i-KDE iphelele kakhulu kepha njengoba iphelele ngokuphelele ibuye isindise kakhulu yize bekwazile ukuyinika ukukhanya okuncane kusukela kwinguqulo 4.0. Ngiyethemba ukuthi manje ngokuthengwa kweDigia kwaQt indlela ye-KDE izogcinwa isendleleni efanele ngoba kuyabheda ukuthi manje ngemuva kokuhamba ibanga elide kumele baqale phansi uma kwenzeka abanikazi bethatha indlela embi. uma bekufanele ngikhethe enye indawo ngaphandle kwe-LXDe ngingahlala eXFCE kepha njengoba ngishilo… lowo ngumbono wami.
Ukube bewazi. Njengamanje ngisebenzisa i-KDE ku-netbook yami yomsebenzi. I-KDE ingidla cishe ngokufana (kwesinye isikhathi kuncane, ngezinye izikhathi ngaphezulu) kuneXfce, futhi okuningi, kuncane kuneGnome ... Ucabangani?
Mngani, siyawuhlonipha umbono wakho, impela sikwenza lokho ngenxa yokuthandwayo: Imibala 😀
Ngisebenzisa i-KDE ne-XFCE, inkinga yami nge-KDE ukuthi ukusetshenziswa kwami ​​kwe-CPU kuyaduma futhi isithombe sami simile, maqondana nokusetshenziswa kwememori anginankinga. Ngabe unombono wokuthi yini isizathu sokusetshenziswa okuphezulu kwe-CPU ?
Zama ukusebenzisa uhlelo lokuqapha noku-oda kusuka phezulu kuye ezansi ku-cpu ukubona ukuthi yini edla kakhulu, ungazama futhi ukukhubaza i-nepomuk noma i-akonadi. Ukudla i-cpu encane ungaya ekubukekeni kwezicelo, isitayela, ukulungiswa okuhle futhi kumthelela wokuqhafaza ukhethe i-cpu encane. Kwesinye isikhathi iba yiqhwa ekusetshenzisweni kweplasmoid ethile yeqembu lesithathu.
Ngokuzenzakalelayo izinqubo zi-oda ukusetshenziswa kwe-CPU.
Lokho engicabanga ukuthi kuncike kakhulu ku-Hardware oyisebenzisayo.
Ngineprosesa ye-AMD Athlon 64 × 2 Dual core 3800+ 2Ghz ene-4Gb ye-RAM.
😮 sina?, Iyiphi i-netbook onayo kanye / noma imininingwane ?? futhi yini distro tb ???
ukubona ukuthi kuyasebenza yini emayini: p
Nansi incwadi yakhe yenethiwekhi: https://blog.desdelinux.net/unity-en-netbook-hp-mini/
Futhi isebenzisa i-Debian Testing (yamanje Wheezy).
I-HP Mini 110 ene-1Gb ye-RAM .. 😀
Ngiyithanda kakhulu i-LXDE, izinsizakusebenza ezimbalwa ezizisebenzisayo ziyamangalisa futhi kimi inezinsiza eziningana, i-F4 ukufinyelela i-terminal kusuka kunoma iyiphi ifolda, amabhukumaka, ngokuthayipha nje ngingasesha ifayela ngaphakathi kwefolda engikuyo, njll.
Ngiyavuma namanje ukuthi akuyona eyomsebenzisi we-novice nokuthi akusibo bonke abantu abangathanda ubulula be-LXDE.
Okwalabo abathanda ama-desktops amancanyana, ngikukhombisa isithombe-skrini se-KDE yami esivela kuma-mageia 1 ngenkathi nginaso kwi-pc yami:
Ngemuva kwalokho ungasho ukuthi awunakuba ne-KDE enhle.
Sisebenzise ukuphawula kwangaphambilini, iziphakamiso zami ezithobekile ekwakhiweni kwewebhu, engikuthandayo:
- fushanisa ama-url lapho ushicilela, lokho akwenzeki njengakwimibono yami yangaphambilini eshiya umzimba
- umbhali wokuthunyelwe akabukeki muhle, ungcono ngaphezulu noma ukugqamisa kakhulu
Ukuhalalisela kwami ​​ngomklamo omusha, akukho okuningi okuzokwenziwa ngcono, kucishe kuphelele.
Ukunciphisa ama-URL kuhle kakhulu, kufanele ubone ukuthi ngabe ukubhebhana (ngubani ohlela ingqikithi) unesikhathi manje sokwenza, ngoba lokhu kungukuqalisa obekungekho ezinhlelweni futhi unezinye izinto azenzayo hahahaha.
Ngisebenzisa i-KDE kuMageia 2, ngijabule kakhulu ngayo, yize kuyiqiniso ukuthi kwesinye isikhathi izinketho eziningi futhi ezihlakazekile ziyayidida, kepha ngiyabambelela kuyo ngenxa yezinketho zayo zokumisa.
Ngingathanda futhi ukufunda ngezinye izinketho, njengamanje ngicabanga ukufaka i-Enlightenment, okuthi yize ngandlela thile kungeyona ethuthukile, muva nje basebenza kanzima kakhulu, futhi iyalungiswa (ngaphandle kwemenyu). Futhi ukuthi uphakamisa ezinye izindawo, ngikuzwile nge-Openbox nezinto ezitholakele, kepha kulokhu angikaboni izinto eziningi ngokwazo.
ngiyabonga ngolwazi lwanamuhla
Cishe kuzofanele ngibonge Ubuntu ngokubeka ubumbano futhi ungenze ngafuna enye i-distro, ngoba selokhu ngafaka iXubuntu ngijabule, ilaptop yami ibukeka njengenye, iyanethezeka. Okuwukuphela kokwehla kokunambitha kwami ​​ukuthi ukubonakala kwephaneli eliyinhloko ngithande iGnome Classic kakhulu ku-Ubuntu. Konke okunye, yebo, iThunar ingahle ishoda kancane kepha kimi nginokuningi.
Ngicabanga ukuthi akekho onamandla ukwedlula omunye, njengoba umbhali ekhombisile, kuyindaba yokunambitha nezinhloso, izinhloso. Zizohlala zikhona lezi zinhlobo zezimpikiswano, hhayi nje ngezindawo zedeskithophu, amasistimu okusebenza, amanoveli, ushingamu, amakhibhodi, ama-iPhones, ama-PC, njll.
Kimi okuphelele nokukhangayo kakhulu i-KDE kepha angiyisebenzisi ngoba izinketho eziningi zingenza ngibe nesiyezi.
Ngiyayithanda ideski elikhanyayo nokuthi yini engikudingayo, engisebenzisa ngayo iXfce engiyithandayo.
Ngisebenzisa i-Gnome 2 evela kumaSolusOs futhi manje ngivivinya i-xlde engeyimbi neze, futhi ihlangabezana nengikudingayo.
Ubumbano, iCinnamon neGnome ngombono wami akusebenzi kakhulu futhi kuza ngokubona, ngaphambi kokuthi ngisebenzise i-KDE ngoba iyakhanga futhi iyasebenza, okuyinto engenjalo.
Ngizonika enye i-KDE ukuzama, ngifunde izibuyekezo eziningi ezinhle muva nje.
Ngokwami, njengamanje ngineMate neCompiz futhi ngijabule ngempilo, sengathi ngisekhona neGnome2 ...
I-athikili enhle, ilinganiselwe kakhulu, +1!
Vele-ke kufanele ngibe phakathi kwabasebenzisi abangu-2% abasele ngoba kimi uhlelo lokusebenza olubaluleke kakhulu namuhla futhi ngaphandle kokungabaza engilusebenzisa kakhulu - engilusebenzisa kakhulu, kufanele ngithi- yisiphequluli: ngihlala nginesiphequluli esisodwa noma ngaphezulu evulekile, ayisikhungo sokusebenzisa kwami ​​umshini.
Yebo, isiphequluli singesinye sezicelo ezisetshenziswa kakhulu, kepha ekugcineni kukho konke okufanele ufe kuMphathi Wefayela 😀
I-oda lami engilithandayo:
- KDE (umsebenzisi impilo yonke, kanye nonjiniyela).
- Ubunye (bunomqondo omuhle, kepha kusebenza kabi).
- I-XFCE noma i-LXDE (basesezingeni elifanayo, bayalondoloza kakhulu).
- Isinamoni (endala efanayo, akukho okusha).
- IGnome (ayisebenziseki).
Juan Carlos kusho
@hipersayan_x Ngabe uyathuthuka ku-KDE? Ungaba nentshisekelo yokuhlanganyela ekusatshalalisweni?
Futhi ucabangani nge-MATE DESKTOP ??? Ngiyayithanda. Imfoloko yeGnome 2 ngethemba impilo ende. http://mate-desktop.org/
Okwamanje, i-KDE ideskithophu enhle kunazo zonke kimi, inqubekela phambili yayo ibimangalisa ngokuzinza nangejubane, futhi iphelele futhi iyahleleka. Bengiphinde ngaphunyuka eGnome enguqulweni yayo yamanje, okokuqala ngenxa yokusebenzisana kwayo okungenakwenzeka kwe-pc ejwayelekile, izinketho zayo ezimbalwa zokucushwa (cishe i-nil), ngaphezu kwalokhu izingqikithi eziningi angizithandi, futhi ngengeza inkinga izandiso ezingahambelani nokudlula kwezinguqulo, ngaphandle kokusebenzisa izinsiza eziningi kune-KDE. Ngisebenzise i-XFCE neMATE, kepha azange kungikholise okuningi. Futhi akudingeki ukuphika ukuthi kunezinhlelo ezinhle kakhulu ze-Gnome, kimi ngincamela ukusebenzisa izinhlelo zokusebenza ze-Gnome multimedia kunalezo ze-KDE. Ngokufanayo wonke umuntu usebenzisa okubonakala kukuhle kakhulu kuye futhi kuvumelana nezidingo zakhe, futhi okwami ​​kugcwaliswa ngokwanele yi-KDE njengendawo yedeskithophu.
Muva nje ngisebenzisa ezinye izindlela ezimbili ezingakhulunywanga lapha, i-razor-qt ne-elementary (i-pantheon shell). Insingo (engeyona imvelo yedeskithophu) ngiyisebenzisa njengohlobo lwe-kde ngaphandle kwe-kwin (ngisebenzisa i-openbox) futhi ngaphandle kwe-plasma. Isebenza kahle kakhulu (izinzile kakhulu kune-plasma njengoba ilula) futhi isebenzisa okuncane (idla ngaphansi kuka-250 MB ngezinqubo eziningana ze-kde eziqaliwe.
I-Pantheon igobolondo le-gnome uma ngingaphosisi, isebenzisa i-gala njengomphathi wewindi, amafayela njengesiphequluli sefayela, ipulangwe njengedokodo, nezinye izinhlelo ezahlukahlukene ezenziwa iqembu lokuqala. Kimi muhle nje, indawo ezenzakalelayo nenhle kunazo zonke engiyitholile kuze kube manje ngaphezu kokuzinza (noma ngabe kuyi-alpha noma i-beta), uma, ingenazo izinketho eziningi zokwenza ngokwezifiso.
I-razor qt nayo ngiyivivinyile futhi kufanele ngisho ukuthi ingaba umncintiswano omkhulu ku-LXDE. Ayinawo amathuluzi athile (ngokwesibonelo, kwi-netbook ayikho into yokubona ngeso lengqondo ileveli yebhethri, noma okungenani angikalitholi), kepha kukonke kubonakala kimi ukuthi inekusasa, yize muva nje ngingakaziboni izindaba zale phrojekthi .
Ngokuqondene nethanga, angijwayele ukusebenzisa iGnome Shells ngenkuthalo ngesizathu esithile esingajwayelekile, kepha iphrojekthi eyisisekelo ibilokhu ikhathazekile ngokunikela ngezinga elithile lekhwalithi ezinhlelweni zayo, ngakho-ke ngicabanga ukuthi inguqulo ezinzile izonikeza okuningi engizokhuluma ngakho .
Ngokuphathelene nendatshana, ngike ngazama ama-desktops ashiwo futhi ngiyafisa ukwazi ukuthi iGnome 3 icasule amaShell namafilosofi amaningi okusetshenziswa ngesisekelo esifanayo. Ngiyakhumbula ngenkathi bememezela ukuthi inguqulo 2.30 kuzoba ingu-3 (yize ekugcineni bekungu-2.32), basho ukuthi ushintsho belungeke lube buhlungu kakhulu, mhlawumbe ngokubhekisele kulokho okwenzekile nge-KDE ngaleso sikhathi.
Ngokubona kwami ​​lolu shintsho aluzange luphazamise kangako, kepha lwalucasula, ikakhulukazi ngokungabikho kokusebenza okuthile, yize ngiphinda, angilusebenzisanga ngakho umbono wami uyaphikiswa.
Ekugcineni, ukuphendula umbuzo kokuthunyelwe, i-KDE ideskithophu engiyithandayo, ngenxa yezizathu eziningi futhi yize kunezinto engingazithandi (njengokuziphatha kwezaziso ngaphansi kwezimo ezithile), kuhlala kunezinye izindlela noma unjiniyela engingaxhumana naye.
Ukubingelela kubo bonke.
Uxolo Vicky, kepha ungaphawula ukuthi iyiphi i-distro oyisebenzisayo nolunye ulwazi lokuthi ungayifaka kanjani i-Pantheon Shell?
Akusizi ngalutho, bengisebenzisa i-Enlightenment (noma i-E17) isikhathi eside futhi kuyangisebenzela. Kuyalungiswa, KUSEBENZA NGENDLELA ENGIYIFUNAYO. Ngiyibheka kakhulu i-XFCE, kepha i-E17 iyashesha njengaleyo. I-KDE inezinhlelo zokusebenza ezibabazekayo, njenge-K3B enamandla, ngimane ngazifaka futhi zisebenza izimangaliso ngamandla azo amakhulu kepha ngaphandle kokulahlekelwa isivinini engisidingayo. I-Pcmanfm inginika engikudingayo njengomphathi wefayela futhi ngiyithatha ukusuka eGnome ngiye eGimp nakwezinye izinhlelo ezibhalwe ku-GTK2o3. Iqiniso ukuthi anginalutho lokuhalela ama-greats, banginika izinhlelo engizidingayo, ngenza, kanye ne-E17, indawo enhle engake ngaba nayo, esheshayo futhi elungisekayo ngokweqile. Kubi kakhulu ukuthi ayinakwa. Yizame, kuyiqiniso ukuthi ihluke kakhulu ekuqaleni, kepha kufanelekile ukuthatha imizuzu embalwa ukuyilungiselela.
Ngiyabonga uma ufundile wonke la mazwana. 🙂
Angikwazi ukukhuluma kakhulu nge-E17 ngoba ngiyizame kakhulu, kuncane kakhulu .. Empeleni angazi noma ngabe yiDesktop Environment noma iWindows Manager ……
Ngisebenzise futhi i-e17 futhi iyashesha kakhulu, yize kufanele sithembeke ukuthi ayinakho ukusebenza, kepha ingancintisana ngokuphelele ne-LXDE ne-XFCE ngaphandle kwezinkinga. Okuhlulekile kimi lapho kulungiselelwa imenyu (Ngingathanda ukuthi iphathe i-oda engilifunayo) nokulungiswa kwesikrini futhi kwezinye izikhathi ayikugcini ibuyele ku-800 × 600 ...
Ngabe ungabeka amazwana kancane mayelana nokuhlangenwe nakho kwakho nge-E ??? Ukuqala nje ngeMageia, ngifuduka ngisuka ngisebenzisa i-Debian kanye ne-derivatives futhi ngizofaka i-E17.
I-athikili ehlose kakhulu .KDE okungcono kakhulu, i-XFCE izinhlonipho zami.
Okuthunyelwe okuhle. Ngiyayithanda kakhulu i-KDE ngezizathu ezifanayo ozishoyo (ikakhulukazi ngobuhle), kepha ngenxa yendlela okulimaza ngayo ukusebenza ngihlala ngigcina ngiyilahlile (ngigcina ukuyisebenzisa bekune-debian, engicabanga ukuthi yi-distro uzinze kakhudlwana, kepha ne-Kian debian igcine isinda). Ngisanda kunikeza iLinux Mint ithuba futhi, neCinnamon, kodwa futhi, yize kungesiyona into enkulu, lokho kulahleka kokusebenza ngenxa yokusetshenziswa kwemithombo kugcina kungigulisa. Kepha ngaphambi kokulahla iMint, kulokhu nginqume ukuzama iXFCE (eminyakeni embalwa eyedlule ngiyisebenzise eXubuntu, kuleso sikhathi ngahlupheka ngesiphazamiso eThunar esilengise ikhompyutha yami), kanti iqiniso ukuthi ngangijabule kakhulu ngokusebenza kwekhompyutha yami. , ukukhanya okulula kakhulu nokusebenza okuhle. Ngokujwayela (futhi ngoba kunezinhlelo ezingangigculisi kuLinux noma ngenxa yokuthi azikho izinketho ezifanayo) ngihlala ngisebenzisa iWindows 7. Kepha emasontweni ambalwa edlule ngisebenzisa iMint ngokuqhubekayo ngeXFCE, futhi kaningi ngibuyele kuWindows (ngesidingo esithile). I-PCManFM ihle kakhulu, okuyiyona engiyisebenzisayo. Mhlawumbe kuwumbhedo lokhu kuwe: Ngi (kabi) ngijwayele ukulalela umculo nge-plugin ebizwa nge- "Enhancer 0.17" ethuthukisa umsindo ngendlela enhle, uma ku-Linux bekunomdlali owusekelayo noma obene-complement efanayo , ngikwazi ukuthi ukweqa kwami ​​ku-linux kube okokugcina. Khonamanjalo, ngilalela umculo nge-Aimp ngeWine ... Esikhathini esedlule bengingazizwa ngikhululekile, ngijabule futhi nganelisekile ngokusebenzisa i-linux. Ngangijabule kakhulu ukwazi ukuthi u-debian uthathe isinqumo nge-XFCE, leyo nhlanganisela izokwenza amakhompyutha abe namandla kakhulu ... nakanjani ngizobuyela ku-debian. Jabulela
Ngeke usho ukuthi iGnome neShell yayo uhlelo olubi kude nayo.
Yebo ungasho ukuthi kubi, ngoba kubi, futhi kuya ngokuya kuba kubi kakhulu.
Mhlawumbe kubonakala kukubi kuwe ngoba kushiye ngemuva umqondo wepaneli + yedeskithophu enezithonjana + zohlu lokuthengisa kepha kimi bekungaphambili, lapho ngizamile ukusebenza nayo, uyasiqonda isizathu sezinto.
Izici ezingaphansi nezincane + ezenziwe ngezifiso + ezisindayo + ezinokusebenziseka kalula nokufinyeleleka = Kubi
LOL !! Futhi angithandi ukugxeka iGnome kakhulu, kepha kuyiqiniso, angiqondi ukuthi kungani kuncipha ngokwezifiso? bese-ke kufanele sisebenzise izinhlelo ezingekho emthethweni nezandiso, okufanele ngabe sezivele zifakiwe ngokwakhona ...
Uxolo Gnome 3, uma ungomunye wabangu-4 ababi kakhulu !! Futhi lokho angazi ngeXFCE ...
U-Aaron Mendo kusho
Ukubheka okuhle kakhulu ngisebenzisa i-GNOME-Shell kuFedora 17 anginazo izinsizakusebenza eziningi i-1 GB ye-RAM ne-Pentium 4 processor kepha nokho isebenza kahle kakhulu: D. Ukushintsha isihloko, bewazi ukuthi kuzoba noSuku Lonjiniyela be-EFL eBarcelona Spain? http://www.enlightenment.org/p.php?p=news/show&news_id=49 KungoNovemba 5, kubonakala sengathi izikhanyisi sezivele zifaka isheke lamabhethri kumephu yomgwaqo zikhomba ukuthi sezivele zisebenza ku-Enlightenment 18 http://trac.enlightenment.org/e/roadmap Ngiyethemba uzocubungula ukuyishicilela njengezindaba.
Phendula u-Aaron Mendo
I-XFCE RULLZZZ, engikushoyo ukuthi ngidlule kuzo zonke, kuyisimangaliso kepha kudla izinsiza futhi kimi ukuthi anginayo incwajana yokubhala njalo exhunywe manje, impilo yebhethri ibaluleke kakhulu, manje nge-xfce + debian ihlala isikhathi esingu-5: 30, nge-KDE + Arch yathatha u-2: 40, kepha ngaphandle kokungabaza i-KDE yinhle futhi iyalungiswa, manje i-XFCE iyajabulisa kakhulu ngoba kufanele ube nesikhathi esihle samahhala sokuyishiya njengoba ufuna, i-elav njengenjwayelo i-athikili enhle kakhulu i-blog beyiyinhle kepha kunento engingayithandi ngithola ukuthi iphaneli elifanele likhulu kakhulu noma okungenani kuzikrini ezincane libukeka likhulu hehehe, imikhonzo bafana futhi ngiyabonga ngomsebenzi wakho !!
Ukube bewazi ukuthi okungenani kune-KDE ne-Debian, ngibonile ukuthi ukusetshenziswa kwebhethri kuphakeme kune-Xfce ku-Debian 😕 angazi, mhlawumbe bayimibono yami 😀
Ukuthi ukusetshenziswa kufanele kube ngaphezulu lapho kudliwa izinsiza eziningi, okungenani kimi ku-arch kde ngidutshulwe ku-400 mb of base base, okungukuthi, ngaphandle kokusebenza, futhi nebhethri lahlala cishe ngo-2: 40 hrs, manje Angikaze ngiyizame i-KDE ku-debian, ngizobona ukuthi ngizokwehla yini ukusebenza ngempelasonto futhi ngizokutshela kamuva ukuthi ngihamba kanjani neqembu lami, ngiyabingelela u-Ariki
Yebo, ngiyathanda futhi ukuthi i-KDE ayisebenzi kahle ne-Debian, kepha manje ngisebenzisa i-KDE neMageia futhi ngenza kahle !!
Sawubona, i-athikili enhle. I-KDE ideskithophu ephelele ngokuphelele futhi edidiyelwe, yize ngingayiboni nakancane futhi ihamba kancane ukuvula izinhlelo kunezinye izindawo futhi ngoba ngezinketho eziningi futhi kuyo yonke indawo zingenza ngibe nesiyezi. I-XFCE ideskithophu enhle kodwa ayinaso isizathu sokuba nayo ingaphelele ngoba isikhathi eside iyeke ukuba ideskithophu engasindi, yehluleka ngeThunar, ngezinqamuleli zekhibhodi nezikhiye zomsebenzi nezinye izinketho ezikhethekile kakhulu, i-gnome ayinzima kangako kimi Iqala ngibe ngaphansi kuka-300 MB futhi yize kube ushintsho oluphelele kumqondo wedeskithophu (ngingasho ukuthi ukuphela kwendawo yedeskithophu) kukhiqize kakhulu kusetshenziswa ikhibhodi. I-LXDE yideskithophu engasindi okufanele ngabe iyikho, ngiyaxolela ukungabi kwayo komphathi wamandla nokunye ngoba kufanele kube ngama-PC amadala.
UMnu Linux kusho
Kuyini ukuba nekhompyutha enhle, hhayi eyiqiniso @Elav, manje ubeka imvelo yedeskithophu ngayinye endaweni yayo efanele, bekubonakala kungimangaza ukuthi ukhulume izimangaliso zeXFCE kuphela (uyakufanelekela, futhi akutholakali ngokwengeziwe ), "iziqalekiso" ezimbalwa zeGnome 3 (nazo ziyavuma) ne-KDE icishe yakhohlwa.
nakho konke ukuba nalawo ma-gigabytes ama-4 amahle wenqama, usebenzisa i-KDE futhi, ngiyakwamukela ngokusemthethweni kwiklabhu ye-KDE !!!!
Hahahaha, empeleni, ngine-KDE kuNetbook futhi, kanye neXfce kunjalo ...
Umbiko we-elav muhle kakhulu, ngesikhathi sami esifushane ku-Linux ngazama izindawo ezine, futhi engiyithanda kakhulu yi-xfce, ngiyayithanda ngoba ngiyakwazi ukuyenza ngendlela oyithandayo futhi ayidli kakhulu njenge-kde, ukuphela kwayo engingayithandi njengazo zozine i-gnome.
KDE ideskithophu ye-semantic.
I-XFCE kuze kube sekufeni, konke engikudingayo, akusekho, noma kungaphansi.
Angisebenzisi ihlengethwa, i-nautilus noma i-thunar. ukuphela okuhle ne-voila. Angidingi ikate noma i-gedit, i-vim ne-voila. ngakho konke okunye engikudingayo ukukhulisa usayizi, ukuhambisa amawindi, ukuhamba phakathi kwamawindi futhi ngikwazi ukukwenza usebenzisa ikhibhodi kuphela (i-google chrome + vimium ukuzulazula) ingabe ufuna ukukhiqiza? kunezindawo eziningi, ezingcono kunalezo ezishiwo ukwenza lokho. Ukukhuphula umkhiqizo kusho ukuvalelisa igundane futhi ukwazi ukwenza konke, noma cishe yonke into ngekhibhodi, into ebalulekile ukuthi iyalungiswa ngokwanele futhi ungakhetha ukuthi iziphi izinkinobho ozosebenza ngazo 😉
Yebo, ngicabanga ukuthi ukusho ukuthi ideskithophu enjalo ikhiqiza kakhulu akunangqondo ngoba ukukhiqiza kuncike kumsebenzisi, kunalokho u-Elav ukhiqiza kakhulu nge-KDE, ideskithophu yakho, mina ngineGnome Shell, enye ene-lxde njalonjalo.
Ngicabanga ukuthi ilungile.
I-distro ehamba phambili ene-LXDE yi-KNOPPIX .. ngoba nje uyakwazi ukuphatha zombili izinhlelo zokusebenza ze-KDE nezeGnome ezisebenza ngokugcwele. Ngikufake lokhu ku-p4 2.26 no-700mb enesizotha yenqama
Namuhla ngisebenzisa kuphela windows, kepha ngilangazelela iMageia 3 ene-KDE 4.9 nokubuyela ku-linux njengasezinsukwini zami zakudala.
Kuzofanele alinde isikhathi eside 😉
URoberto Gea kusho
Futhi babekuphi abaphathi bamawindi, i-openbox, i-fluxbox, noma abaphathi bamathayili njenge-dwm.
Hhayi ngoba banezinketho ezimbalwa ngokwakhona (imvamisa zenziwe ngezifiso kakhulu kune-DE enkulu), kusho ukuthi azinamandla kangako, noma zikhiqiza njengoba ubiza i-elav, futhi lezi azisetshenziswa kuma-PC anezinsizakusebenza ezimbalwa.
Phendula uRoberto Gea
Le ndatshana imayelana nezindawo zeDeskithophu, hhayi iMenenja yeWindows. Kuyiqiniso ukuthi nge-OpenBox, Fluxbox ... njll ungaba namaDeski amahle, kepha akuzona izindawo zeDeskithophu kanjalo .. 😀
Ukukhanyiselwa kungena kuma-desktops ??? Futhi omunye umbuzo, yimaphi amanye amatafula akhona angahlolwa? Kungaba mnandi ukwazi okuthe xaxa ngalesi sihloko, ukunikeza ithuba labo abangabaliwe kangako, akunjalo?
Nginokungabaza okufana nokwakho. Ngakho-ke lokho okuthiwa kuzobizwa nge-Desktop Environment, ngazi lezi ezi-4 neRazorQT kuphela, angazi noma kukhona yini laphaya.
Manje, ngicabanga ukuthi i-KDE iyafana noma ilula kuneGnome.
Ngaphandle kokwenza ubuwena futhi ube muhle kakhulu 😀 hahahaha.
I-athikili enhle, kepha angizukuphikisana kancane nge-LXDE.
Kimi, i-LXDE kulula kakhulu ukuyilungisa ngokungafani nakwezinye izindawo. Njengakho konke kulula njengokufunda imibhalo noma ukusesha i-Intanethi.
Labo abangaziyo bayazi ukuthi ngisebenzisa i-LXDE, ngaphandle kokuthi ngisebenzisa i-Fluxbox (engibe nayo iminyaka engu-4) esikhundleni se-Openbox neThunar esikhundleni se-OpenBox neCompton ukufaka ezinye izinto zokubhala.
Kungani ngiyisebenzisa? Yenza nje lokho engikudingayo ukuthi ikwenze, ngaphandle kokusebenzisa inani elikhulu le-RAM ne-CPU (iCompton isebenzisa kuphela i-2Mb ye-RAM).
Futhi ukuze abanye babone ukuthi i-LXDE noma i-Fluxbox ayimbi, ngikushiya nezithombe-skrini ezi-2 zama-desktops ami:
Phendula ku-Son Link
Kuhle, iminyaka embalwa bengingumsebenzisi we-Linux we-100%. Okokuqala ngezizathu zemfundo, Ubunjiniyela bekhompyutha futhi ngoba ngiyithanda kakhulu. Manje, ngithanda izinto ezilula futhi anginankinga yokuzama ngize ngithole okuthile engikuthandayo.
Ngaqala ngo-Ubuntu + Gnome baze bathuthela e-Unity. Kamuva ngayijwayela le ndawo. Ngiphinde ngazama iCinnamon neMATE. Kukonke, ngemuva kokuhlolwa okuningi ngiyavuma ukuthi ngithanda iMATE noma iCinnamon, kuya ngokuthi ngifuna okuthile okulula kakhulu noma okuthile okuhehayo.
Ubumbano nalo luhle, kepha njengoba sengikhathele ukufaka kabusha zonke izinyanga ze-6, ngino-LMDE + MATE.
Ucabangani ngalezi zindawo ezi-3? Ikakhulukazi uMATE oyimfoloko yeGnome2 neCinnamon okuyimfoloko yeGnome3. Ingabe le yindlela uGnome obekufanele ayilandele? Noma okungenani ushiye umnyango uvulekele wona?
Uma ungibuza, ngicabanga ukuthi iMATE yiphrojekthi okuthi yize ilungele abasebenzisi abaningi, kancane kancane izokhohlwa, ngoba ukuphelelwa yisikhathi kuzokuqeda. Ngokufanelekile, iGnome 3 kufanele ipholishwe kakhulu ngemodi ye-Classic noma ye-FallBack.
Kunabanye (abanye) engicabanga ukuthi nabo bazoba naleyo nhlanhla.
UYoyo Fernandez kusho
Ideski elihle kakhulu, ngokungangabazeki leli engilisebenzisayo. Kukhanya, kukhululekile futhi kuguqulwa kakhulu 😉 http://i.imgur.com/tN9Gx.jpg
Phendula uYoyo Fernández
Hahaha, okungaguquguquka kakhulu angikungabazi ..
LOL !! Sula !! Kepha ngicabanga nokuthi ungangeza kuphela amagajethi futhi inkinga iba lapho umuntu engena ku- "desktop yakho" bese ehambisa izilungiselelo zayo!
IGnome Shell, njengoba kungukuphela kwendawo yedeskithophu (ngaphandle koBunye) engiyisebenzisile.
* Phakade iGnome Shell *
Ngibuka kakhulu i-KDEro muva nje, hehehe.
Kimi okuvumelana kahle kakhulu yi-XFCE yize nsuku zonke ngithanda i-openBox ngaphezulu
Ngicabanga ukuthi kukhona ngoba iphrojekthi ye-Gnome ayithandanga (ishiya eceleni ukuthi yinhle noma cha), futhi okuningi esikufunayo kudeskithophu yethu ubunikazi, ukwenza ngokwezifiso nokukhuluma ... into i-KDE ehlinzeka kahle kakhulu .. Futhi Endabeni yezinye izindawo engibona kuzo iphuzu elibuthakathaka, lapho kufanele uhlele ifayili lokumisa ngqo bese usebenzisa ezinye izinhlelo zokusebenza kanye / noma izandiso, abasebenzisi abangathandi "ukucubungula", abasebenzisi abaningi bokugcina ukuthi i-PC yabo yenzelwe imisebenzi, umsebenzi, nezokuzijabulisa ziyesaba bese zibuyela kuWindows noma zibheke enye indlela. Ake ngicacise, kuyangijabulisa lokhu "kucwayiza" ngekhompyutha yami, kepha abantu abaningi bayawubona umsebenzi wami nakho konke engikwenzayo futhi bayakwesaba. Ngokunambitha kwami, ideskithophu enhle kunazo zonke kuzoba yiyo evumela abasebenzisi bokugcina ukuthi benze imvelo ngendlela elula nengcono, ngaphezu kokwenza umsebenzi wabo ube lula (futhi ungadideki ngezinketho eziningi, iso le-KDE)
Sanibonani nonke, bengilokhu ngisebenzisa ukusatshalaliswa okuningana kwi-PC yami isikhashana futhi ngihlanganyela lokho abanye abakushoyo, ngokuzumayo imvelo ye-MATE, abanye bacabanga ukuthi ingahle iphelelwe yisikhathi kepha uma ubona ukuthi isetshenziswa kanjani kukhulunyiwe wokukhishwa okuyi-LMDE Kungenzeka ukuthi lokhu kungukucindezela okudingwa yiphrojekthi, futhi kungashiwo ukuthi lokhu kungenye yamadeskithophu amahle kakhulu wabantu abasebenzisa i-Gnu / Linux okokuqala ngqa, yize ngisithanda kakhulu isinamoni ngezinye izandiso ungasenza sibonakale kancane ku-mintmenu esetshenziswa ku-MATE, igobolondo le-Gnome libe nezinguquko eziningi engithemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi lingaba lihle yize kusengenye yezintandokazi zami futhi, kepha njengoba u-Elav esho ukuthi kuyindaba yokunambitheka nezidingo
I-Kde iseyidesktop ehamba phambili ngokuya ngokusebenza kwekhwalithi, kepha-ke uma sihlala nePentium IV ingokwemvelo ukuthi sihambe kancane ...
Inti Alonso kusho
Ngikhuluma nge-KDE, (engicabanga ukuthi umphakathi weLinux uwonke ubukela phansi kakhulu) ngabelana ngenqubo kaMalcer kwezobuciko beChakara elandelayo (ephuma kuleli noma ngeviki elizayo):
Phendula u-Inti Alonso
Ngicabanga kanjalo !! I-KDM ne-KSplash yilokho ebengikuthanda kakhulu ngokubukeka, ngizolinda inguqulo yeMegeia !!
Ngisebenzisa i-LXDE futhi angiyishintshi nganoma yini, iyalungiswa, mhlawumbe i-newbie iyinkimbinkimbi ekuqaleni kepha ngemuva kokukwenza okokuqala kuzoba ucezu lekhekhe futhi engikuthanda kakhulu ngama-desktops alula ukuthi ivumela izinhlelo zethu ukuthi zisebenze endaweni uketshezi oluningi kungakhathalekile ukuthi unomshini omuhle yini. I-XFCE kimi ibukeka njengedeskithophu enhle kakhulu kepha qaphela, ayikhanyi kangako uma unomshini onezinsizakusebenza ezimbalwa angicabangi ukuthi inketho engcono kakhulu. Ngisebenzise i-ICEWM futhi kubonakala kimi ideskithophu enhle kakhulu engasindi, elungisekayo kakhulu futhi enhle kakhulu, yize kusamele ngichithe isikhathi esiningi kuyo.
U-Arturo Molina kusho
Ngiyavuma ukuthi i-LXDE igcwaliswe ngezinto ze-Gnome, futhi ngaphandle kwalokho ukuze ikulungele udinga ulwazi lwangaphambilini ukuyilungisa.
Phendula u-Arturo Molina
kimi i-KDE enhle kakhulu inguqulo 3.5 ..
Angizithandi izinhlobo zanamuhla .. empeleni sengivele ngiyifakile i-4.5 ngicabanga kodwa angiyithandi. kuhamba kancane ...
Ngabe leyo nguqulo 4.5 yayingeyinhle kakhulu ukusho, okungukuthi, ayizange ipholishwe nakancane ... 4.8 noma 4.9 kungenye into.
Ngiyaqhubeka no-4.3 !!! futhi ngisebenza ngaphandle kwezinkinga noma isimanga, konke kuyasebenza futhi kungidla kancane, njengeGnome 2.8
Ngingu-user: slaxkware 12.2 KDE 3.5 .. NGOKUSHESHA NOKUQINISEKA ...
KODWA NAMUHLA FAKA KU-UBUNTU WAMI ANGITHANDA ...
Ngisebenzise iGnome isikhathi eside ... ngitsho neGnome3 kepha inguqulo entsha ayikholwanga neze ...
Ngizamile i-KDE futhi konke kwashintsha! Kuyindawo enhle kakhulu yedeskithophu… izwakala ikhiqiza futhi iphelele… awusoze wasala nalowo muzwa wokuthi "ulahlekelwe okuthile".
Ngizamile kuChakra, Sabayon, OpenSuse manje nakuKubuntu. Onke ama-distros akhiwe kahle nge-KDE.
I-KDE ihamba phambili, angiqondi ukuthi kungani ingenayo njengedeskithophu ezenzakalelayo ekusabalalisweni okuningi, uma isebenza kahle futhi iyabumba.
Kubonakala kimi ukuthi lena yiyona nkinga: lapho unikeza abantu izinketho eziningi, ibahlinzeka ngokwengeziwe ngosizi (ngokungathi sína!) Kungakho iningi lama-distros likhetha indawo elula nenqunyelwe okulula ukuthi bayifunde futhi bayisebenzise.
Kukhona neqiniso: namuhla iningi labasebenzisi bedeskithophu alingeni ohlelweni lwalo, lisebenzisa lokho elikunikiwe nendlela elinikezwa ngayo - lokhu kuzoba ngesinye sempumelelo yecebo lika-Apple imikhiqizo yabo?
I-KDE SC izoqhubeka nokuba yindawo yokuzikhethela kwabanye abasebenzisi abaphambili ...
Kwenzeka lokhu ukuthi akusithina sonke esithanda ukwenza ngezifiso, i-KDE inezindlela eziningi zokuyenza ibe ngeyakho. Ngaphandle kwalokho idinga izinsizakusebenza ezengeziwe.
Okungenani ngiyaneliseka nge-LXDE noma i-OpenBox, bengihlala ngithanda isivinini hhayi ukuklama.
Imithetho ye-KDE !!
Njengoba i-Gnome 2 ihambile, ngibambelela nge-Ubuntu 11.04 ... Futhi ngifuna "okuthile" okungifanele mina nawo wonke umndeni ... Futhi ngicabanga ukuthi ngizonamathela kuXfce. IThunar? Yebo, ngisebenzisa i-Midnight Commander noma i-TotalCommander ngaphansi kwewayini (ngiyaxolisa, AKEKHO abaphathi bamafayela engizamile ku-linux basondele, ingasaphathwa eyokuyishaya). Ividiyo? IVLC, kunjalo. Umsindo? Namuhla ngithole iQmmp, okungeyona into ngaphandle kwe-linux winAMP, ingasebenzisa izikhumba ze-2.x. I-Xfce ku-Linux Mint inhle kakhulu, ngoba iguqula imenyu yezicelo "ezijwayelekile" zeMintMenu ephelele kakhulu.
Ngalokho nginohlelo oluthatha okuncane kakhulu (i-PC eneminyaka embalwa, esivele ine-120Gb ye-HD), isebenzisa okuncane kakhulu, futhi iphazamisa kakhulu. Inkinga yami nge-KDE 4 noma i-Gnome3 ngokuyisisekelo ukuthi angisenaso isikhathi "sokufunda" lapho izinto zikhona: kungaba imvelo inembile, noma ayisebenzi kimi. Kulungile, kunezinto okufanele zenziwe nge-terminal (angikhonondi, ngiyinja endala futhi ngaqala ngamakhompyutha ngaphambi kokuthi i-IBM ithengise i-PC yokuqala ...), kepha uma kufanele ngichithe imizuzu engu-4 ukukhumbula lapho kufanele ngishintshe khona ingemuva ideskithophu, angiboni ukuthi ukukhiqiza kuphi (yisibonelo….)
Noma kunjalo, ngemuva kwezinyanga ezimbalwa, ngizamile (futhi ngalahla) i-LXDE (wonke umndeni ubungeke uyithande), i-Gnome3 / Unity / Shell (uma iphuzu eliqinile le-linux ukuthi ungasebenza ngendlela ofuna ngayo, kungani I-Gnome angikwazi? Ngaphandle ...), i-KDe (inzima, futhi iyadida, kungithathe isikhathi esingaphezu kwesigamu sehora ukwenza le nto isebenze ePlasma noma ngabe yini ebizwa ngayo, futhi kwi-netBook bekufanele ngiye ku-inthanethi ukwazi ukuthi ishintshe kanjani njenge «ejwayelekile Futhi lokho kwezicelo ... kahle, ngaphandle)
Ngamafuphi: Ngine-Xfce neminti enesinamoni (linuxMint + Cinnamon). Ngikuso. Eqinisweni, ngine-liveUSB delinuxMint Xfce. 🙂
I-TotalCommander ngaphansi kwewayini? Hahaha, yeka ukwethuka. Awuzwanga ngeDolphin, angithi? noKrusader?
I-lxde ayiyona ideskithophu embi, iyona esheshayo engiyaziyo futhi ngesikhathi esincane ungayenza ibe yinhle ... ivoti elithanda imvelo okuyiyo kuphela engisebenzela kahle ku-pc yami endala !!! haha
Uzamile i-AwesomeWM noma i-dwm?
Ngiyabonga ngokubhala le ndatshana nabo bonke labo abanikeze umbono wabo. Uyafunda ngempela.
Ngibe ne-Linux iminyaka emi-2 futhi ngisebenzise ukusatshalaliswa okuningana ngezinguqulo nezindawo ezahlukahlukene.
Ngahlangana nobuntu uJaunty Jackalope gnome, ngangimthanda kakhulu futhi ngishade ubuntu. kodwa kwathi uma ephuma nemvelo yobumbano ngabaleka ngathi bangijaha ngezinhlamvu. Ngizulazule kuma-distros ahlukahlukene ngaphandle kokuthola ubuhlobo obunzima, kepha uthando lubuyela encwadini yami yokubhalela.
I-Linux Mint Maya Xfce 32 bit
Okunye kuhle kodwa nginamathela kule ngoba isebenza ngendlela engiyithanda ngayo.
Ngiyabonga imininingwane ngoba noma nini lapho bengifuna ukulanda ideski le-xfse.gnome elisesandleni sokudla… ..blablabla, futhi angiqondanga idolo, iqiniso lifundisa kakhulu.Izwe lesoftware liyamangalisa
UGustavo Martinez kusho
Ngikhetha i-LXDE, ilula, ishesha kakhulu, ikhombisa konke okudingekayo futhi engenziwa ngezifiso kahle ngokudlala eduze kwebhokisi lokuvula, elihle kakhulu ngaphandle kokungabaza.
Phendula ku-gustavo martínez
Yebo, ngokwami, ngisebenze kusukela ngo-2000 ngeLinux, bengingumsebenzisi wokugcina kuphela futhi angizibandakanyi kakhulu nokulungisa, inkinga okukhulunywa ngayo ngokwesidingo nangokunambitheka engikuhlala ne-KDE, ngine-netbook nge-kde nezimpukane, ngizamile i-gnome classic, i-3, ubunye, i-xfce futhi kahle kakhulu kepha akumnandi kakhulu ukusebenza kwi-netbook ngalezo zindawo, mhlawumbe i-gnome 2 ishuniwe kepha ukubheka abakushilo ngenhla kuyiqiniso kakhulu kwesinye isikhathi kuthatha eyodwa ekuhleleni okuningi kunokusebenza ngakho-ke ngihlala ne-kde, kudeskithophu yami i-pc ngine-linux mint 14 enesinamoni futhi iya ku-100 ngiyithanda kakhulu, ngokuthembeka uma ujwayela indawo eyodwa kuthatha kancane ukuzivumelanisa nenye, lapho ngisebenzisa i-gnome2 Kungibize kancane kde, ngicabanga ukuthi indawo enamanzi kungaba ukwethulwa kobunye ku-ubuntu ngoba ukusuka lapho abasebenzisi bafudukele kwenye indawo, ngicabanga nokuthi abaningi bayayesaba kancane i-kde, bathi yinhle kodwa kancane kwehlukile, kepha noma kunjalo lapho bengena basala nokuhle ngokunambitha ... Engikukhethayo yi-KDE: D ...
Ngisebenzisa i-LXDE ngizizamile zonke futhi njengoba ngifuna ijubane kusobala ukuthi ngiyayikhetha leyo, uma kusobala ukuthi ngiqala ngokubheka amatafula amahle futhi ngijabule amehlo ami ngikhetha i-KDE, kepha ijubane kuzo zombili alifaniswa.
I-KDE ngaphandle kokusebenza okusebenzayo futhi ku-HW ehloniphekile _practically_ iyashesha njenge-LXDE - ama-millisecond wemehluko ongaba phakathi kwedeskithophu eyodwa nokunye kunikezwe ngaphezu kwakho konke kuzinhlelo zokusebenza ezitholakala kudeskithophu ngayinye lapho kusobala ukuthi awukwazi ukuqhathanisa ukusebenza kwe izinhlelo zokusebenza ezenzelwe i-KDE nalezo ezidizayinelwe i-LXDE.
Ngishintshele ku-KDE ngoba i-gnome3 ibingakhululeki, ngivame ukuvula amafayili wombhalo ahlukahlukene (i-doc, txt) namaspredishithi. Kepha leyo ndawo yabaxuba futhi ngababeka lapho ngangifuna khona. Futhi ngeDolphin ngikwazi ngisho nokufinyelela amafolda e-FTP, angisayidingi i-filezilla futhi nge Kate ngivula futhi ngilondoloze izinguquko kumawebhusayithi ngaphandle kokusebenzisa amaklayenti e-FTP (ngaphandle kweDolphin)
Kimi uMATE ohamba phambili, oneLinux Mint, ukudlula okukodwa.
ULeonardo Daniel Velazquez Fuentes kusho
Sawubona, ngibe ku-Linux izinyanga ezintathu futhi bengiphequlula izinhlobo ezahlukahlukene nokusatshalaliswa nge-Ubuntu 3, 13.04, xubuntu, linux mint cinnamon and xfce, crunshbag, fedora gnome and xfce, bodhi linux, manjaro xfce, sinamoni and openbox, i-OS eyisisekelo yinhle
futhi ngingasho ngokuqondene ne-xfce ukuthi okuhle kunakho konke kuvela eManjaro futhi angizange ngihlale nayo, ngoba ngishade ngokuphelele nge-sudo apt-get install, hahaha
i-mint xfce nayo ayiyimbi, akunzima kakhulu ukuyishuna
Phendula uLeonardo Daniel Velazquez Fuentes
Ngincamela i-LXDE, ngoba uyakwazi ukwenza imisebenzi ongayenza nganoma yimaphi amanye ama-desktops kepha ngejubane elingenakuqhathaniswa! Kuyashesha kakhulu futhi kusebenza izinhlelo ezisindayo njenge-Eclipse, i-gimp noma iziphequluli zamanje ezinamathebhu amaningi avulekile.
Yize kuliqiniso ukuthi i-KDE inakho konke esesandleni futhi yenza umsebenzi ube lula, ukusetshenziswa kakhulu kwezinsizakusebenza kwenza kube nzima futhi kwehle ngokwanele ukwenza imisebenzi eminingana, noma ngaphezulu uma i-hard disk ineminyaka yayo futhi ilahlekelwe yizinguquko zayo. Yize kuliqiniso ukuthi i-LXDE inconyelwa abasebenzisi abanolwazi oluncane ngoba kwesinye isikhathi kunemisebenzi engenaso isikhombimsebenzisi sokuqhafaza ngokuzenzakalela futhi kufanele ubhekise esigungwini esesabekayo, kunjalo ngezinqamuleli zekhibhodi (kukhona i-Obkey kepha ayihlanganisiwe ngokwakhona).
Ngicabanga ukuthi isivinini esikhulu se-LXDE (eshesha kakhulu kune-Windows XP) sinxephezela ukushiyeka okumbalwa ekusebenzeni esinakho futhi njengephuzu elinamandla, kuqala ngokushesha okukhulu kunanoma iyiphi enye ideskithophu futhi zonke izinhlelo zokusebenza ze-gnome zisebenza kahle. Woza, kumane nje kuyindaba yokuzivumelanisa nayo ngomkhuba omncane futhi ukusetshenziswa kwayo nsuku zonke ucezu lekhekhe; ukukhohlwa ukwehla lapho uvula amawindi, ukushayisana ngenxa yokuntuleka kwememori, ukucubungula izinkomba ngokweqile, phakathi kokunye. Noma iyiphi imbiza yanele 🙂
i-kde ingenziwa ngezifiso ukuyibeka ifana namanye amadeski
IGnome2 (kimi) yayiyindawo engcono kakhulu yedeskithophu engake ngazama. Izici eziningi ezilula nezinhle zenze umphathi waseMexico abe yinto eyodwa ohlwini lwami lwezindawo eziyizintandokazi. Yingakho ngithi, i-ERA.
Lapho iGnome3 iphuma, umbono wami ungishaqisile; Kungenzeka kanjani ukuthi iminyaka eminingi kangaka ngisebenzisa imigoqo emibili, eyodwa yezicelo ezisebenzayo iyanyamalala futhi kufanele ngisuke ewindini elilodwa ngiye kwelinye ngendlela ehlekisayo, okuwukucindezela inhlanganisela yokhiye noma ukuvula imenyu yezicelo ezibusisiwe? Futhi leyo yezithombe, iqeda isimo.
Noma kunjalo, ngicabanga ukuthi iGnome3 yayiyi-fiasco ephelele futhi inenhloso ecacile yokufanisa i-Unity. Ngicabanga ukuthi nowokugcina uyamshaya. Angazi.
Ngidonswe ku-LXDE isikhathi eside. I-KDE ingeyalabo abathanda ukwenza ngezifiso. Hhayi mina, ngendlela. Okuthandwayo kungukuthanda.
UCarlos Bolaños kusho
Kuzo zonke i-linux ngihlala neLinuxmint KDE nalabo engikusebenzise yonke i-fedora, i-suse, i-ubuntu, i-mandriva cinemon njll futhi njalo kufanele ngisebenzise i-voldver nge-linuxmint17 okulula ukuyifaka isebenza kuzo zonke izinhlelo zemultimedia, i-inthanethi, ihluzo zehhovisi i-screensaver, iphepha lodonga njll
Phendula uCarlos Bolaños
URomán Alejandro Lazcano Hdez. kusho
ngethemba ukuthi uphilile lapho ufunda lokhu, ngiyakutshela, ngithenge okokusebenza okuhlomile engakulethwa kimi ngamawindi 7, —- amd athlon IIx2250 (64 bit) processor ku-3000 mhz, umama targ asrok n68-vs3, ddr3-a1 2048mb / 400mhz , - okwakuyipirate, ngenxa yezinkinga zomnotho futhi wafuna ezinye izindlela zokuzama ubuntu, linuxmint, futhi ngalo mzuzu fedora -live, desktop-86-64-20-1. iso– nayo enginikeze izinkinga njengokumangala. Ku-Ubuntu bengingasoze ngenza umsindo, izibuyekezo ezimbili ze-fedora zilandiwe kepha azisebenzi, ngoba ayingivumeli ukuthi ngenze noma yini ngemuva kokungena kudeskithophu ngoba isikhombisi asihambi nakancane sigcina ngokwenza isikrini noma isithombe sikhubazekile futhi simangele. Namuhla bengifuna ukufaka futhi amawindi futhi bekungeke kube njalo, ngazama ukufaka i-Ubuntu kabusha kepha futhi, ayifundi amadiski wokufaka, kokuthunyelwe engikufundile kuthi le nguqulo ye-fedora yenza okwenziwa yiWindows 8, okuwukuvala indlela yokungakwazi ukufaka olunye uhlelo lokusebenza. ngicela usize.
Phendula uRomán Alejandro Lazcano Hdez.
Le bhulogi ingisize kakhulu ukukhetha isikhombimsebenzisi ... ikhombisa ukuthi noma ngubani oyibhalile unolwazi olwanele lwalokho akhuluma ngakho nokuthi yini okungafanele akhulume ngayo ngenhlonipho yami \_ -_- /
USolwazi Yeow kusho
Akungabazeki ukuthi i-XFCE 4 indiza yonke indawo, futhi nekhono lokubukeka elinako liphakeme kakhulu ngisho naseGnome. Kepha i-KDE4 ubuhle, iphikisana nokuthi mdala kangakanani lapho kukhawulelwe khona kwimishini yakudala kepha uma kunomshini omningi, i-KDE5 isivele (eguqula izinhlobo zokuqala ukuzungeza) iyamangalisa. Ngaphandle kokungabaza, uma une-2Gb engaphezulu yenqama ye-KDE4 (bese kuthi lapho eyesihlanu ifika) kuzoba okungcono kakhulu ongakhetha kukho. Okwamanje, i-XFCE iseyindlela enhle.
Phendula uSolwazi Yeow
UDemian Kaos kusho
Kuze kube yilapho uMATE eqala ukubasusa: XFCE LXDE
Phendula ku-Demian Kaos
U-Alejandro Tor Mar kusho
Ngingumlandeli we-KDE, ngisebenzise i-gnome amahlandla ambalwa - angizange ngiyithande - iyangikhathaza, ngifake ngempumelelo i-LXDE emshinini ongajwayelekile, ngivivinya i-XFCE futhi ngiyithande kakhulu kune-LXDE ...
Phendula u-Alejandro Tor Mar
U-Antonio Gonzalez kusho
Ngingusosayensi wamakhompyutha, uchwepheshe nohlelo, ngisebenzisa amawindi ehhovisi ezinhlelweni zokubalwa kwemali futhi ekhaya ngine-Windows laptop neLinux, ithebhulethi nomakhalekhukhwini one-Android.
Ngisebenzise ama-distros amaningana futhi nginamathela ku-Debian, ngenxa yokuqina kwayo, inani lamafayela nefilosofi.
Ngisebenzise i-gnome 2 ngokulula kwayo nokulula, kepha njengoba ngisebenza namafayela kakhulu bengicasulwa iqiniso lokuthi i-nautilus (njenge-thunar) isusa (i-trash) amafayela / amafolda ngaphandle kokucela isiqinisekiso, esinga khubazeka / sinikwe amandla ku-Windows Explorer, i-Dolphin ne-PCManFM
Ngacela iqembu le-gnome ngaleso sici futhi bathi lokho kwakungokwakhiwa futhi babengeke bakuguqule.
Ku-gnome bengikwazi ukuvula amafayela kusuka kwamanye ama-PC kunethiwekhi yendawo, engasebenzi ku-KDE / LXDE ngeDolphin / PCManFM ngokulandelana, bekufanele ngikopishele lelo fayela kudiski yendawo ukuze ngikwazi ukulisebenzisa.
Kodwa-ke, kuma-distros afana ne-knoppix, i-PCLinuxOS (i-PCLOS) ngisho naku-cd ebukhoma ye-debian uma kungenzeka, kepha uma uwafaka ku-pc yami, womabili ngokugcwele (iphakethe le-meta) futhi ngamunye ngamunye (ngokufaneleka noma nge-synaptic) akuphumelelanga. Ngize ngafaka futhi ngamisa inqwaba yezinsizakalo zenethiwekhi (i-KIO, SMB, njll.).
Ngizamile ukusebenzisa iDolphin nePCManFam ku-gnome futhi bekunezinto eziningi ezisele ngaphandle kokukwazi ukuhlanganisa.
Kusuka ku-gnome3 angikhuthazwa kakhulu yi-interface noma isidingo sezinsizakusebenza zevidiyo, kepha iyasebenziseka, ingavula amafayela kunethiwekhi yasendaweni kepha ayiceli isiqinisekiso lapho isusa / ithumela kudoti.
Ku-KDE uma icela isiqinisekiso kepha angikwazi ukuvula amafayela kunethiwekhi yasendaweni
I-xFce iyi-gnome elula, ngiyifundile kancane futhi angiyithandanga, futhi ingishiya nginezidingo zombili
Ngiyayithanda i-LXDE, kepha angikwazi ukuvula amafayela kunethiwekhi yendawo.
Ungayilungisa kanjani i-PCManFM noma i-Dolphin ukuze ukwazi ukuvula / ukusebenzisa kusuka kumafayili avela kumafolda abelwe kwinethiwekhi yendawo?
Ungayenza kanjani i-Nautilus icele isiqinisekiso lapho kususwa amafayela noma amafolda?
Ngithatha imvelo ehlangabezana nalezo zidingo ezimbili
Ngize ngikhokhele isisombululo ngisho esisodwa sezidingo zami
Phendula u-Antonio Gonzalez
URoberto perez kusho
Ngemuva kokusebenza ku-gnome 2 ngidlule ku-kde 4, inketho ye-gnome 3 ayingijabulisanga nakancane, kunalokho yangithusa ngakho ngasebenzisa ithuba lokugxuma kusuka ku-kde kuye ku-5 futhi kusukela ngaleso sikhathi kwangibamba, ngicabanga ukuthi ideskithophu ephelele Ngokuqondene ne-Deepin angikwazanga ukuyigaya, yinhle futhi iyalungiseka kepha iswele into engingayazi futhi ngeLxde neXfce zisabonakala zibaluleke kakhulu futhi zingaqondile.
I-KDE 5 nakanjani ingumnqobi.
Phendula uRoberto Pérez
ILinaro ithuthukisa ukusebenza kwe-Android 4.0.4 kufika ku-100%
Incwadi evulekile esuka kwaDigia eya kumphakathi we-KDE